Izindaba - Izinyathelo ezithile ezibalulekile zenqubo yokulingisa ekusakazeni ngokunemba!
Precision thusi kuyinto ejwayelekile ekubunjweni inqubo steel ekubunjweni abakhiqizi, kodwa ukuthuthukiswa wamanje akuyona njengoba ezivamile njengoba castings yensimbi futhi castings steel, kodwa ngokunemba thusi angathola ukuma kuqhathaniswa olunembile futhi kuqhathaniswa okusezingeni eliphezulu ekubunjweni ngokunemba.
Indlela ejwayelekile ngokwengeziwe yokusakaza ngokunemba ukuklama isikhunta somkhiqizo ngokusho komdwebo. Umehluko phakathi kokuphonsa ngokunemba nokuphonsa insimbi ukuthi ukukhishwa kwensimbi kufanele kube ne-margin ethile yokucubungula, kuyilapho ukusakazwa ngokunemba kungaba ne-margin noma cha. kuphethini ye-wax. Ngemuva kokuthi igobolondo eliqinile lisomile, iphethini langaphakathi le-wax liyancibilika. Lesi sinyathelo sidonsa amanzi, ukuze sithole umgodi; Ngemuva kokubhaka igobolondo, singathola amandla anele nokungena komoya. Ngemuva kwalokho singaphonsa uketshezi lwensimbi oludingekayo emgodini. Ngemuva kokupholisa, singasusa igobolondo futhi sisuse isihlabathi, ukuze sithole imikhiqizo eqediwe ngokunemba okuphezulu.Singaqhuba ukwelashwa kokushisa noma ukucubungula okubandayo ngokuya ngezidingo zemikhiqizo.
Inqubo yokulingisa utshalomali:
1. Ngokuya ngezidingo zemidwebo yomsebenzisi, isikhunta sihlukaniswe saba isikhunta se-concave esingenhla nesingaphansi, esigcwaliswa ngokugaya, ukujika, ukuhlela nezinye izinqubo. Ukuma komgodi wesikhunta kufanele kuhambisane nengxenye yomkhiqizo.Ngenxa yokuthi isikhunta se-wax sisetshenziselwa ukubumba i-wax yezimboni, sidinga ukukhetha izinto ze-aluminium alloy ezinobulukhuni obuphansi, izidingo eziphansi, intengo ephansi, isisindo esincane nokuncane iphuzu lokuncibilika njengesikhunta.
2. Ngemuva kokukhetha okokusebenza okuhle kwe-aluminium alloy, singasebenzisa le aluminium alloy ukukhiqiza inqwaba yezinhlobo eziqinile ze-wax zezimboni.Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, isikhunta esiqinile se-wax yezimboni singaveza kuphela umkhiqizo owodwa ongenalutho.
3. Lapho iphethini ye-wax isilungile, kuyadingeka ukuguqula umkhawulo ozungeze iphethini le-wax. Ngemuva kokukhipha izinto ezingadingekile ebusweni, kuyadingeka ukunamathela iphethini elilodwa le-wax ekhanda elilungisiwe.
4. Sinenqwaba yekhanda lesikhunta eligcotshwe ngengcina yezimboni, bese sifuthwe ngokulinganayo ungqimba lokuqala lwengqimba yesilika engamelana nomlilo kanye nokushisa okuphezulu.Lolu hlobo lwezinhlayiya zesihlabathi lincane kakhulu futhi luhle, olungaqinisekisa ukuthi ubuso bokugcina obungenalutho bushelelezi.
5. Bese ufaka iphethini le-wax efektri lapho sibeka khona izinga lokushisa ekamelweni lokomisa umoya wemvelo, kepha akumele kuthinte ukuguqulwa kwesimo sephethini yangaphakathi ye-wax. Isikhathi sokomiswa komoya wemvelo sincike ekubukekeni kwangaphakathi kwesikhunta. Ngokuvamile, isikhathi sokuqala somoya omile cishe ngamahora we-5-8.
6. Lapho iphethini ye-wax yomile emoyeni, kudingeka ungqimba lweglue yezimboni ebusweni bephethini ye-wax, bese kufakwa ungqimba lwesibili lwesihlabathi ngaphezulu. Izinhlayiya zesihlabathi ezingxenyeni zesibili zikhulu futhi ziqine kakhulu kunalezo ezisendlaleni yokuqala.Ngemva kokuthinta ungqimba lwesibili lwesihlabathi, njengolokuqala, lwenza ukomiswa komoya wemvelo
7. Ngemuva kokuthi ungqimba lwesibili lwesihlabathi selomile ngokwemvelo, ungqimba lwesithathu, ungqimba lwesine kanye nolwisi yesihlanu lokuqhunyiswa kwesihlabathi kuzokwenziwa ngokulandelana.Izidingo ze-sandblasting: sidinga ukulungisa izikhathi ze-sandblasting ngokuya ngezidingo zomhlaba nevolumu Umkhiqizo.Ngokujwayelekile, imvamisa ye-sandblasting izoba cishe izikhathi ezi-3-7.Usayizi wezinhlayiyana ze-sandblasting ngayinye uhlukile, isihlabathi senqubo ngayinye sibi kakhulu kunaleso esedlule, nesikhathi sokomisa umoya nakho kwehlukile. Isikhathi sokufaka sanding ephethini eliphelele le-wax kungaba cishe izinsuku eziyi-3-4.